mhando 0.9.0 – gadzirira, kurongwa, famba!
Zvita 12, 2012 kubudikidza chipo 9 Comments
Pa 12/12/12 (chii akanaka musi) pa 20:12 (imwe nguva yakakodzera). Tava asunungurwa shanduro 0.9.0 pamusoro plugin yedu. Shanduro iyi yaiva huru nyorazve yemarongero edu uye Kutarisirwa peji. Kufambira kubva chete peji refu kwazvo o zhinji saka nzira kuti itsvedze tabbed inowanikwa.
Shanduro iyi hakusi chete zvizorwa asiwo zvaisanganisira zviviri zvikuru zvinhu azvipiwa pazviruva itsva yepamusoro Tab:
1. Kwebasa rinofanira debugging rutsigiro: Zvino tichakwanisa kukupa rutsigiro nani kushandisa plugin Kugona matanda, uye tendera kure debugging.
2. Advanced parsing mitemo: Izvi zvichakubatsira Akakubvumidza kuchinja nzira magwaro vari kuputswa shanduro uri paIndaneti. Kunoitawo kuti zvikuru kwazvo granulation uye zvakakodzera injini kuti dzakananga kushandisa nyaya yako.
zvisinei – munyeverwe, avo zvinhu, kunyange zvakanaka vaedzwa anozivikanwa yemhando uye experimental. Kuzvishandisa chete kana iwe zvauri kuita.
Pane zvimwe zvakawanda saka zvinhu uye tsikidzi unocherekedza zvaisanganisira, kuti vazhinji vavo vakakodzera zvavo romukova, asi iye zvino, anorega kuyambuka kuchinja nerogi:
* A itsva mutauro kusarudzwa Widget kunobva select2 (Very zvakanaka sarudzai bhokisi pamwe mireza)
* Added Ctrl makiyi kukurumidza kufamba dzokutambura / anotevera zvinogumbura (Kunonatsiridza kumhanya yokushanda pamwe inowanikwa)
* A nzira itsva kuti anobvumira kuti itangezve ari configuration faira kune recommanded defaults
* CSS unocherekedza nokuti makumi maviri navaviri dingindira
* Dzivisa rokukwidza subwidgets vari arun mapeji
* Akabvisa mutsauko pakati editable uye viewable mitauro, zvino mumwe mutauro unogona chete kuva vanoshingaira kana vakaremara
* Updating jQueriUI kuti 1.9.2 (jQuery zvino vanofanira kuva 1.6+)
* Unocherekedza ari Z-indekisi nokuda Rekare dropdown (patch by chemaz)
* Unocherekedza Tsikidzi pamwe panaakabatanidzwa pamwechete Chinese nyore uye chinyakare
* KUISA tsikidzi kudzivisa ndiwedzere mushanduro akwegura kwazvo
* Kudzvinyirira zviziviso apo Widgets Zvasikwa zvakananga kwedu basa
* Dzivisa rewriting maURL mumutauro default, kazhinji pave canonicals
* chinyorwa yedu inodiwa iri apo Widget anobvumira marongero mutauro default
* Pakupedzisira rwakapedza dambudziko MSN kushandura uye CR / LF
Mumazuva akatevera kwokutanga kusunungurwa, netsikidzi vatatu afukurwa ndokuinama, kana chinhu nyore haasi kushanda, Iva nechokwadi kuti kuzorodza mafaira ako.
Ina Under: Release zviziviso, Software Updates Tagged With: 0.9, bugfix, debug, zvikuru, parser, rusununguko